Tartanka loogu Jiro Gudoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Wararkii ugu dambeeyay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Tartanka loogu Jiro Gudoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Wararkii ugu dambeeyay
Aug 12, 2019 - 16 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Tartan xoog leh ayaa loogu jiraa xilka Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho oo ah hal kursi oo bannaan, kaddib geeridii Allaha u naxariistee C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow) oo horaantii bishan u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ismiidaamin ah oo xafiiskiisa lagula eegtay.
Waxaa dhici karta in todobaadkan ama horaanta todobaadka soo socda ugu dambeyn la magacaabo xilka Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada.
Dadka odorasa siyaasadda ayaa sheegaya inay ku xidhan tahay shaqsiga loo xusho awood ahaan taageerada uu beesha ku dhex leeyahay iyo sida Madaxweynaha ugu kalsoonaan karo.
AK Cumar Dhagey waa u qalmaa inow mayaayadda shido Sanad, laakiin maahan nin qaadan Amar Little Dictator Kheyre.
* Anigoo Hogaan Hiraab ah, Heridiid hakaa horeeyo waa Hertaan haleysku Hoogo.
Tan ayaa ka kow ah in Banaadir u baahantahey MAQAAM u gooniya oo shacabku doortaan ninkay kula xisaabtamilahaayeen Amnigooda iyo Canshuurtooda iyo Caafimaadkooda.
Farmaajo hadduu yahey Leader hatago Kismaayo halkaas ayaa shaqo looga baahanyahee, haddii kale sidaas ha u saaro – SUULKA Waraaqaha AMARKA LITTLE DICTATOR KHEYRE.
Nin Xilkiisii loo doortey laga jeebsiibey miyuu u daaha Axmed Cadde Garmadoobe oo ilaa saaxiibkiis Ceydiid Jabhad la ahaa.
* Inaan layaal iga dheh,
Waxaa la yiri nin dhibki waa ninka kale baraarihi. Hadda adigu ma waxaad ku hodmaysaa dagaalka A. Madoobe iyo Farmaajo. Halkaa fursadda kaaga muuqata anigu garan mayo, lkn aad baad arrinkaa u jeclaan lahayd.
Meeshan Jubbaland haddaad u malayso inay kaliya reero isku haystaan waad ka dhacsantahay, meesha Kenya iyo Soomaali baa isku haysta, haddaad Soomaali tahayna intaad gidhiishta iyo Ree hebelta iska daysid, safka Soomaalida gal oo Kenya sidii dhulkaa looga saari lahaa tabliiqi.
Waligaa ma fahmikartid u jeedada hadalkeyga, taas ayaa keentay inaad dhahdo ma waxaad fursad ka raadin dagaal Daarood dhexmaro.
Haddaa Ma waxaan u dooraney inuu nala maamulo Minishiibiyo Xamar,
(Ama da’adaa kugu yar ama Siyaasadda ayaad Baadow ka tagey) aniga ayaa kaaga roon Farmaajo oo rabo inuu maamulo dhamaan Koofur Soomaaliya kadibna Teendhada Soogeliyo Somaliland, adigaa DNA aabahaa ku hoogey ayaad wali dacalka heysaa.
Oo muxuu hadda u taraa tolkiis oon aheyn eed iyo hafaryo.
– Nina Qaran ayaa u muuqdo Nina Guno ayaa u muuqato
Khilaaf soo kordhay,iyo kala duwanaasho la baadhbaadhayo.
Maqaamka Muqdisho haduuna ahayn mid ay dawladu u xilsaaran tahay,oo iyadu ka shaqaynayso,dhibkiisa ayuu yeelandoonaa.Kooxo dano gaara le ayaa soo bixidoona.
Magaalada Adis waxaa u badan Amxaaro.Waa dhaway ayay isku dayeen inay u sameeyaan maaul gaara oo ka kooban Amxaarada.Kooxdii kadambaysay in magaaladu yeelato maaul Amxaaraysan ayay dawladu xabsiyada ku gurtay.
Haatan,Kooxdan hor boodaysa arimaha Maqaamka Muqdisho maaha Koox u hadlaysa qaab dawladnimo iyo qaranimo ah.Waa Koox Hawiyaysan oo shacab ah.Waa Koox u badan Mucaarid,laakiin shaadh qabiil xidhan.
Malaha waa Alshabaab,malaha waa qarandiid qarsoon,malaha waa ganacsato lacag raadis.
Labadeenna adigaan fahamsanayn siyaasadda meesha taal. Farmaajo waan ogahay inaanu waxba aniga iigu toornayn gooniya, kamana sugayo, muhiimaddu waa sida aad tiri oo ah inuu dalka mideeyo oo qaran taabba galay ka tago markuu xilkiisu dhammaado si halkaa looga sii amba qaado. Haddaba inuu taa kari la`yahay eeddeeda ayaynaan isku raacsanayn inuu leeyahay iyo in kale.
Tusaalaha kuugu dhow waa caasumadda oo aanu taageero ka helin siduu gobol u tegi karaa, soo ninku inuu horta Villada soo dhaafo ma ahayn, Villadii ma ree qurac buu ka soo dhaafi la`yahay mise ree qansax, haddaan adiga taada kuu raaco, mise karti xumo shaqsiyeed?.
Waxaan kaloo ku dari lahaa oon hubaa inuuna ninkani qabyaalad iyo eex u tegi la`ayn maammullada ree qurac, ee uu xeeris iyo dhib ha abuurin ay ka tahay, anigu kuma taageersani nabad doonnimada qaarkeed oo maanta waa nin dumaal ka xoshooday wiilal kama dhalo, miyirse waa loo baahanyahay iyo miisaan si intii laga maadan karo gacan ka hadal looga maato.
Waar horta ninka u oggoloow inuu Villada soo dhaafo adaa doortaye. kkk
Muqdisho ma dad kale ayay yeelan doonaa?
Hadiiba Maqaamka Muqdisho la sameyyo,sow dadka maanta degani noqonmaayaan kuwa maamulka iyo masuul degaanka noqondoonaa,mise dad kale oo aduun kale ka ymid ayaa la wareegidoon?
Haa, waa sax.Hadii uu dad kale imanayo magaalada,waa wax fiican oo wixii hore ayaa meesha ka baxaya,laakiin dadka maanta joogaa haday shaati kale soo xidhnayaan maxaa la faaiidayaa?
Ma shaatiga la soo badashay ayaa faaiido noqndoona?
Sida sida shaadh Diimeedka ama shaadh xibiyeedka loo soo xidho.
Dadku waa dadkii 3okii sano ee u dambeeyay ku noolaa Muqdisho.Dadku waa dadkaasi Villa Somaliya ka baxa lagu kariwaayay.Dadku waa dadkaasi masgax ka jira ee Somaliyeed.
Muxuu soo kordhinayaa Maqaamka Muqdisho?
Anu waxaan isleeyahay. Sababta dowlad walbo u dhaafi la.dahay villa somaliya. Waa cadaalad darada lagu haayo shacabka Muqdisho. ee bixiyo xaquuqda muwaadin ee lagu leeyahay.
Wexey bixiyaan canshuurta. Wax xuquuq ah malahan. Wexey ku hoos noolyihiin dowladdi dhameed ee dalka loo doortay. Ma haystaan wado ay umaraan.
Iskuulka. Isbetaalka shaqadooda.
Sow doqonimo maaha in aad ku doodo halla sheqeyaan dowladda halkii aad ku doodi laheyd dadka guto waajibka dowladda halla siiyo xuquuqdooda.
Nimankaan daa.uud ee isku haysto kursi farmaajo geyn doono waa doqono.
Nimanku miyeysan ogeyn in ay ceeb ku tahay in xoolohoodii nin kale kasooro.
Waa marka lagu leeyahay muduloodku waa gobta somalida. Ileen waa tanoo kale. Kaalay wexeyga iga soor.
cashurta meelba waa laga qaadaa.Bosaso cashuur ayay bixisaa,laakiin waxaa lagu maamulaa degaankaasi.Berbera cashuur ayay bixisaa,laakiin waxaa lagu maamulaa degaankaasi,Kismaayo waa sidaa oo kale.
Waxaa maqan midaynta cashuuraha,taasina waxay ku xidhantahay sida ay dawladu u fidiso maamulkeeda – ileen wadanku ma lahay dawlad e.
Dhaqaalaha uu Turkigu galiya Muqdisho ee aadka u badan,muu ahayn mid uu magac beeleed ku bixiyay.Wuxuu ahaa mid caasimadii Somaliyeed lagu dhisayo oo ku yimid magac Somaliyeed.Somalida ayaa rabta in caasimadooda dib loo soo nooleeyo si ay aduunka ugu soon noqdaan.
Marka dhagax lagu kordhibaya,hadaad taidhaa anigaa le,dee waa qalad oo wiixii dadka Somaliyeed loo qabtay,ayaad doonaysaa inaad na duudsiiso.
Waa in la xidhxidhaa Koxda horboodaysa Maqaamka Muqdisho ee shacabka ah.
War annagaa taageersan maqaamka Muqdisho…
Waa in la fuliyaa sida ay Muqdisho ka rabto beesha Hawiye….
Waa maxay dadkan uruuriskaa ee tafta ku dheggan beesha, kuna haysta deegaankeeda….
Waar soo deegaano ma lihidin yaa idin ku haysta meeqaamka tuulooyinkiina ama magaalooyinkiina….
Waar horta yaan la isu gabbane yaa ku haysta, Hawiye Xamar…ma Soomaali oo dhan, ma beelo magaalada la leh, ma beelo aan weli Xamar ka qixin. Kkkkk…war annagaa yaabnay….war Xamar waxaan ogayn iyadoo goraygu ka haddaafaye maxaa keenay in hadda farqaha la isku haysto…
Beesha Hawiye Xamar siday u xukumayaan iyo maqaamka Xamar siduu noqonoyo haddii loo madaxbanneeyo waa la saadaalin karaa…waa siduu ahaa intii aan diwladda federaalka la samayn ee aanay Xamar imaan…waa uun isbaaradii, goobaysigii xaafadaha, khadkkii cagaaraa, qabqablanimadii, urur diimeedyadii, maxkamadihii iwm. ..meeqaam kale oo aan filayo inay keenayaan ma jiro….ee dee hadday koodaas jeclaadeen magaaladana majority ka yihiin dee halloo daayo…
Doodda Soomaali u furan waa saas caasimad qaran ma kuu ahaanaysaa waa dood furan….waa arrin talo u baahan….
Waar la yaab…waar Xamar Majeerteen iyo Isaaq oo ugu guryo iyo dhismayaal badnaa iyana ka hayaame….kana tashade, uma malaynayo inay wax dana ka leeyihiin sidii Hawiye rabo inuu Xamar u maamusho….dee marka yaa ku haysta….hadday rabaan isbaaradoodii, khadkii bulluugga ahaa, warlordskii, goobaysigii xaafadaha, deegaan maxkameedyadii kkkkkk..dee waa dookhooda maamul ee halloo daayo….waa haddii Soomaali u qirsantahay in Hawiye Xamar majority ka yahay….haddii arrinku yahay Hawiye Xamar majority kama aha dee markaas waa dood kale bedka halla soo dhigo….haddii kale arrinku waa in loo daayo siday rabaan inay magaalada u maamulaan…waxaa Somaali u furan inay ka tashadaan hadday Xamar sidaas caasimad ugu ahaanayso iyo haddii kale….war xaalku waa kaas…
Doodaadu wexey mecno yeelan doontaa markaad ku doodo dadka somaliyeed in la simo.
Turkiga ayaa dhaqaalo ku bixiyay Muqdisho talyaani ayaa ku bixiyay. Qadar ayaa ku bixiyay. Waxaan u arkaa weli in aan ku xisaabtameyno xoolo aanan laheyn.
Kismaayo bosaaso hargeysa jowhar baydhabo. Intaba waa lagu cunaa xoolo aduunka laga keenay. Dee kuwaasba waxaa lagu soo qaaday magaca somaliyeed. Muqdisho. Kuwa la keeno howgu badnadaan laakiin waxaa maamulo somalida oo dhan. Maaha wax ay qabsadaan reer Muqdisho. Marka maba kaala hadlaayo wax aduunka laga soo tuugsaday.
Anigu waxaan ahay muwaadin. Adiguna waxaad tahay muwaadin.
Anigu waxaan bixiyaa wax ay aheyd in aan Wada bixino. Adigoon waxba bixin waxaad dowladda ku leedahay metelaad. Degma ahaantaada. Anigoo bixiyo xaquuqda muwaadin. Ma helin wax metelaad ah. Sidaas oo ay tahay hadaan dhoho metelaad maqaam ayaan xaq u leeyahay. Waxaan kaala kulmaa aflagaado. Sida. Alshabaabaad tahay tuugbaad tahay. Qaran dumis ayaad tahay.
War anigii gudanaayay waajibka ayaad igu sheegeysaa xumaan. Adigoon waxba kusoo kordhin maxaad isku qiimeysay?
In afka laga sheegto midnimo ama qaran doon aan wax la jirin waxba soo kordhin mayaan.
Qofka rabo in uu ka hadlo dowlad somaliyeed waa in uu noqdaa qof wax kusoo kordhiyo. Sidoo kale qof rabo in uu wax mucaarado waa in uu noqdaa qof wax kusoo kordhiyo Waxa uu mucaaradka ku yahay.
Hadaadse adigoon waxba kusoo kordhin mucaarad ama muxaafad noqotid. Dee yaaba ku og.
Maxaad ku soo kordhisaa dawlada?
Wax aad ku soo kordhisaa ma jirto.Xataa Villa Somalo ayaa xoog lagaag saaray lol
Raqda dawlada ayaad rabtaa inaad wax ku hesho,iyo inaad dawlada ka dhigato mid wax lagu helo,oo marka ay abaari dhacdoba caawinada la keeno lacag u badaltid.
Maqaamki Somaliyeed adoo hasyta,maxaa ku wareershay?
Sxb aniga garqaad ah dowladda canshuur ayaan siyaa. Waxaan alaab kala degaa dekadda Muqdisho waxaan ku baxaa boono uu ii jaro Dr beyle. Waxaan Muqdisho ka dhistay 2 guri waxaan ogolaansho ka qaatay Dr beyle.
Adigu waxaad ogolaanshaha ka qaadataa. muuse biixi markaad rabto In aad guri ka dhisato borame. Waxaad ku tahay mucaarad xitaa waxaad ugu yeertaa fackinstreet. Dhexdiina magalo saa Idinkaa wax idin dhexeyaan. Anu weligeey dowladda banaadir state. Uguma yeerin fackinstreet kaliya waxaan dhahaa ii ogolaada xuquuqda aan leeyahay. Marka sow qalad kuguma ahan in aad lakala safatid shacabka iyo madaxdooda xisaabtamaayo.
Dheexdahaan war wareegsaday. Weysa huri weyday.
Mr BaHaL jaalloow, Haddaad adigu kortay ood Somalinimo gaadhay NOO TARTIIBI aniga, Dabshid iyo Garqaad WAAN soo korayna oo weligeen joogimayno REER hebel baa reer hebel ka fiicane. WBT